AutoDesk - Bogga 8 - Geofumadas
Microsoft ayaa ku adkeysanaya in ay burburinayso 3D
Ka dib markii Microsoft ugu dambayntii go'aansatay inay iibsato Yahoo !, iyada oo ujeedkeedu yahay inay ka hesho dhulka hoostiisa Google, waxay heshay shirkad u heellan qaabka 3D. Kani waa Cagliari, abuuraha barnaamijka 'True Space', tiknoolajiyad aad u adag laakiin gabi ahaanba raqiis ah ($ 595). Iyo maxay tahay qiimaha ay ku noqoneyso aalad ku habboon kartida qaabeynta ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, dalwaddii Earth
Jawaabaha ma bixin karo
Had iyo jeer waxaan arkaa Google Analytics si aan u ogaado ereyada muhiimka ah ee dadku u yimaadaan blogga, sidaa darteed waa la ogaan karaa mawduucyada isticmaalayaashu waqti badan ku qaataan iyo waliba xag-jirnimada, ereyada adeegsadayaashu kaliya u yimaadeen laakiin waxay ahaayeen daqiiqado eber ah. Waa caqabad wanaagsan in la ogaado mowduucyada wax laga qoro, illaa iyo inta ...
Waxyaabaha ESRI, maxay yihiin?
Tani waa mid ka mid ah su'aalaha ay dad badani isweydiiyaan, ka dib shirweynihii ESRI waxaan la nimid tiradaas oo dhan oo aad u fiican oo liis gareyaal ah laakiin taasi waxay dhowr jeer sababtay jahwareer ku saabsan waxa aan ku mashquulsanahay waxa aan doonayo inaan sameeyo. Ujeedada dib-u-eegidgan ayaa ah in la helo isku-dhaf ah waxa ...
ArchiCAD waa madal CAD ah oo suuqa ku jirtay muddo dheer, in kasta oo markii hore ay u ahayd nooc Mac ah, haddana waxay ahayd illaa 1987 in nooca 3.1 la yaqaan. Haddii aad xasuusato, ArchiCAD 3.1 horey ayey ula tartameysay AutoCAD 2.6 sanadkii 1987, sida ay sameeyeen DataCAD iyo DrawBase, laakiin waa sannadihii ugu dambeeyay ee ay ...
Kani waa liiska alaabada AutoDesk iyo Bentley Systems, iyagoo isku dayaya inay helaan isku ekaansho udhaxeeya, inkasta oo ay adkaatay maxaa yeelay codsiyada qaar waxay leeyihiin jaheyn isku mid ah, laakiin qaabkoodu had iyo jeer isku mid ma aha. Kahor intaanan arag qaar ka mid ah isbeddelka AutoCAD iyo Microstation. Isku soo wada duuboo, waxaan soo qaadan karnaa gabagabada soo socota: Madal ...
Map-ka AutoCAD AutoDesk Bentley Systems 3D Dwg
Waxaan dhawaan ka hadalnay imaatinka AutoCAD 25-kii sano iyo 6-da cashar ee laga bartay taariikhdeeda. Sababtoo ah Microstation waa mid ka mid ah barnaamijyada 'CAD' oo tartan weyn ku leh suuqan, iyo habka mid ka mid ah kuwa yar ee ka sii noolaa jiil dhan oo nidaamyo ah oo ay gaareen AutoCAD ...
Sida loo soo saaro faylasha AutoCAD-ka ee internetka
Mid ka mid ah su'aalaha inta badan la isweydiiyo ayaa ah "Sideen ugu isticmaali karaa awooda AutoCAD ee loo yaqaan ´publish to web´ ee Mashruuca Freewheel". Mashruucani waa aalad ka socota shaybaarada AutoDesk, taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha isdiiwaangeliyey inay keydsadaan, maamulaan nidaamyada iyo wadaagga xogta. Tani waxaa daabacay Lynn Allen ...
Markii hore waxaan arki jirnay sida loo sameeyo DTM, iyo khadadka khadadka leh 'AutoCAD' si loo soo saaro khadadka wareegga. Barnaamijka ugu habboon ee tan lagu sameyn karo waa GeoPack, oo ka socda Microstation oo u dhigma Civil3D oo ka socda AutoDesk, sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa Descartes, oo u dhiganta AutoCAD Raster Design. Barnaamijyadan waxaad ku keydinaysaa a ...
Waa maxay ESRI oo raadineysa ruqsadaha cusub?
Sida laga soo xigtay war qoraal ah oo ka soo baxay ESRI, laga bilaabo sanadka soo socda waxay wax ka badali doontaa qaabkeeda rukhsad bixinta iyada oo loo marayo godka (garaaca wadnaha ama furaha firfircoonida ee ku xiran processor-ka). In kasta oo ESRI ay xaqiijineyso inay u sameyso hagaajinta dhibaatada ay sababtay xaqiiqda ah in aqrinta ee "xudunta" ay sameyso marka adeeggu ...
Ku xir xirka Dijital ah ee leh Mapinfo, Khariidadda Autodesk iyo Arcmap
Markii hore anigoo ka hadlaya isku xirka Google Earth iyo ESRI, faallooyinka waxaan ku qoray wixii Digital Globe ay sameysay markii ay furaysay marinka ay ku xirmaan (si ku meel gaar ah). Akhrinta golayaasha Gabriel Ortiz Waxaan ka helay falcelinta kuwii sameeyey waana tan ra'yi: http://www.digitalglobe.com/start/Q407holidayIC/landpage/index.shtml Waxaan raacay isku xidhka, I…
Nidaamka GIS ee bilaash ah, maxaad u caan ahayn?
Waxaan u bannaynayaa booska u furan milicsiga; booska akhriska balooggu waa gaaban yahay, sidaa darteed waan kaaga digayaa, waxay noqon doontaa inaan xoogaa fududeyno. Markii aan ka hadlayno "qalabka bilaashka ah ee GIS", laba koox oo askar ah ayaa soo muuqanaya: aqlabiyad aad u tiro badan oo weydiisa su'aasha ... oo maxay yihiin kuwaasi? ... oo ma jiraan dad adeegsada? ...
AutoDesk blog ESRI Grass GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GvSIG, GIS kala cayncayn ah
Halkan waxaa ku yaal mowduucyo xiiso leh inta lagu jiro bisha Noofembar: 1. Kaamirooyinka Google Street View ee Mechanics-ka caanka ah wuxuu noo sheegayaa kaamirooyinka loo adeegsaday in lagu dhiso khariidadahaas cagta wadada ... iyo qaar ka mid ah surwaal :) 2. Beddel isku-duwayaasha UTM - Geográficas Cartesia waxay bixisaa shaqeynta qalab loogu talagalay in lagu beddelo ...
Waxaan u qaadaneynaa boostadan si aan kuugu rajeyno mahadnaq farxad leh oo leh turkey qurux badan oo nooga yimaada goobta baaritaanka shaybaarada AutoDesk, oo lagu sameeyay Addraw ... internetka! Turkigu waa shaqo uu qabtay David Falk, oo gebi ahaanba lagu sameeyay qalabkan khadka tooska ah ee internetka kuu oggolaanaya inaad abuurto jaantusyo fudud, oo aad alaabooyinka ku qaabeyso wax ...
Boggii hore Page 1 ... Page 6 Page 7 Page 8